Ino iOS 11.0.2 inogadzirisa matambudziko ebhatiri? | IPhone nhau
Kunyangwe paine vazhinji vashandisi vanoti hupenyu hwebhatiri neIOS 11 hwakangofanana nezvavaigona kuwana neIOS 10, huwandu hwevashandisi vanoti iyo yegumi neimwe vhezheni ye iOS haisi iyo yakagadziriswa sekushandisa bhatiri.
Kubva payakatangwa, vashandisi vazhinji vanoti bhatiri remidziyo yavo rakaderera zvakanyanya, richisvika pamatanho anotyisa asati amboonekwa. Nguva pfupi yapfuura kuburitsa iOS 11.0, Apple yakaburitsa yekutanga yekuvandudza, iOS 11.0.1, diki yekuvandudza iyo yakanangana nekugadzirisa nyaya dzeMail neAptlook
Mazuva mashoma apfuura, Apple yakaburitsa imwe diki diki, yekuvandudza iyo mukufungidzira inofanira kugadzirisa matambudziko ebhatiri eiyo iPhone 6 ne7 kunyanya, kunyangwe vamwe vashandisi vachiti iyo iPhone 8 haina kunyatsonaka zvachose. Apple haina kuziva chero nguva kuti bhatiri remidziyo rinogara zvishoma pane zvakajairwa, asi Ndingadai ndakaedza kugadzirisa dambudziko nekusunungurwa kweIOS 11.0.2. muchivande.
Vakomana vanobva kuAppleBytes, vaita bvunzo yekuita mairi vakashandisa iyo iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s uye iPhone 7, vese vakapomera 100% bhatiri uye neshanduro 11.0.1. Mushure mekuedzwa kwapera, vakagadzirisa zvishandiso kuIOS 11.0.2 uye waita bvunzo imwechete kuti uone kana bhatiri rave nani kana kana, pane kudaro, richiri rimwe rematambudziko arikunyanyisa kuvhiringidza vashandisi.
Iyo bvunzo dzakaitwa pamwe neGeekbench application, chishandiso chinoita maitiro akasiyana, imwe neimwe yakazara kupfuura yapfuura uye izvo zviri pachena zvinoguma mukushandisa bhatiri rechishandiso. Sezvatinogona kuona muvhidhiyo, Apple haina kugadzirisa matambudziko ebhatiriMuchokwadi, zvinoita sekunge pane mamwe madhivha hupenyu hwebhatiri hwakatoshomeka pane neiyo yapfuura vhezheni yeIOS.
Dambudziko iro vashandisi vanowana izvozvi nderekuti mazuva mashoma apfuura, Apple yakamira kusaina iOS 10.3.3, saka hapana nzira yekudzokera kune yazvino vhezheni iyo Apple yakaburitsa yeIOS uye kuti yaive yakanaka sei kuratidza vashandisi. Izvo zviri pachena nderekuti rinotevera gore, vashandisi vazhinji vanofunga kaviri pavanogadziridza avo madhizaivha kune iyo nyowani vhezheni yeIOS kusvikira vatarisa kuti kuita kwacho kwakakwana here kana kuti kwete
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Ino iOS 11.0.2 inogadzirisa matambudziko ebhatiri?
Ini ndangodzikisira pashanduro 10.3.3, saka zvinoita sekunge Apple ichiri kusaina iyo vhezheni.
Apple haichisiri kusaina 10.3.3
Apple inoenderera kusaina iOS 10.3.3. Kuti uitarise, iwe unofanirwa kungo pfuura nepsw.me uye tsvaga iyo iPhone 6s kuti uone kana ichiramba ichisaina kana kwete.
Sezvo iwe wakadzikiswa, haugone kumisikidza nhanho dzekutevera.
Pindura kuna Osckar
MANDY zvinoreva zita akadaro
CHIKAMU CHICHAVA KANA UCHIFANIRA KUDZORORA, UNOFANIRA KUTI UIISE IOS 11 NEKUTI HACHICHANGOGONESEKA
Ndakazviita semazuva ese. Ichi chinyorwa chinotsanangura.
zvinonakidza, nekuti chinongedzo chaunosiya chinotaura zvakajeka kuti hachisisina kusainwa. Iko kuyedza, maita basa!
Ndine ma6, ndakaedza kudzikisira kusvika pa10.3.3 uye yaizorembera pandakaratidza iyo yekushandisa menyu. Kana uchitangazve, inodzoreredza iyo ios yekuvandudza bhar uye pandinodzoka kuchiratidziro chikuru chemifananidzo, ndinovhurazve menyu ekushandisa uye zvakafanana. Ndakaedza kuisa zvakare kubva kuTunes asi ndikazowana kukanganisa kusingazivikanwe 6. Ini ndaifanira kumisazve ios 11, Ini pachokwadi handinzwe kuda kutenderera ndichitenderera pakati peimwe vhezheni neimwe, ini ndichamirira kugadziridzwa kutsva, ivo vachave kuzvigadzirisa nekuti kune vazhinji vashandisi vane dambudziko iri.
Ndichiri pa9 ndakafara
Kana iwe uchigona kutaura chokwadi, mubvunzo unenge uri "Pamubhadharo wechii ???
Ini ndangoedza uye hazvizodzikise ne iPhone 6S. Mukupedzisira ndinofanira kudzorera iyo 11.0.2 zvakare.
Zvakashata zvakanyanya nezve bhatiri.
ye6S kana ichiri kusainwa, hazviwanzo asi zvakadero, kune iyo 6S Plus haina kusainwa, zvinova zvisingawanzoitika. Ndine 6S Plus uye inguva yekupedzisira kuti ini ndigadzirise saizvozvo kutanga, enda Apple, foni kubva kumafuro iwayo kuitira kuti vakwanise kukuendesa pamusoro pebheteri saizvozvo uye pamusoro pezvose havakutenderi kuti udzokere kune inoshanda system "kushanda" uye kwete kushanda, njodzi yakadii.
Zvisinei, kubvisa bhatira bhatiri rakareba zvakanyanya.
DZIMWE KUSVIRA 11.1 BETA 2 UYE BATTERY RINOSHANDA ZVINOSHAMISA
Pindura kuna ROBZAR
Ini handidi zvekuvandudzwa zviviri zvekupedzisira, kunze kwebhatiri, iyo wifi inogoneswa nguva zhinji kunyangwe ndichiimisa, haichashanduki pachiratidziro pandinotora iphone uye maapplication ari kumira kushanda zvakanaka, ini vanoda kuvhura mamwe uye vanovhara. Ini ndinofanira kuadzima uye kuisazve asi mamwe acho kwete kunyange kuti ndaifanira kuabvisa. Ndakagara ndichifarira Apple asi ini handisi kufara zvakanyanya nezvazvino kuvandudzwa. Ndine iphone 7
Microsoft inovhura iyo Microsoft Edge beta chirongwa cheIOS